स्वस्थ र खुसी जीवन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय - स्वस्थ र खुसी जीवन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ असार, 05:55:33 AM
काठमाडौं । हामी जे गर्छौं, सबैको मूल ध्येय हो सन्तुष्टि एवं खुसी । जो कोहि, चाहन्छन् आफ्नो जीवन खुसीसाथ बितोस् । खुसी खोज्न अन्त जानुपर्दैन । हामीभित्रै छ । तर, पनि कति दुर्लभ !
खुसीको अर्थ पनि व्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुन सक्छ । कसैले केहि कुरामा खुसी भेट्छन भने कसैले केहि । मानिसको रुचीअनुसार खुसी पनि फरक फरक हुन सक्छ ।
तर, सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मानिसको जीवन खुसीयालीपूर्ण हुनु भनेको दुःख, पिर, चिन्ता बिना स्वस्थ भएर बाँच्नु हो । त्यस्तै खुसी भनेको स्वतन्त्र भएर बाँच्नु पनि हो । आफूले चाहेको काम गर्नु, आफूले चाहेको ठाउँमा जानु र आँफूले चाहेको जस्तो खानु पनि खुसीको अर्को रुप हो ।
भनिन्छ नि, मानिसले पैसाले खुसी किन्न सक्दैन । साँच्चै नै खुसी हुनु भनेको पैसा कमाउनु वा कुनै क्षेत्रमा सफल र चर्चित हुनु होइन । यो त जीवनशैली र सोच्ने तरिकासँग जोडिएको हुन्छ ।
शरीरको कुनै पनि भागमासानो दुखाईले पनि तपाईको हरेक खुसी खोस्न सक्छ । त्यस क्षणमा जिन्दगी देखि नै तपाईलाई दिक्क लाग्छ । त्यसैले होला स्वास्थ्य नै जीवन हो वा मानिस सुखी हुनु भनेको स्वस्थ हुनु हो भन्ने गरिएको । त्यसैले तपाई जीवनमा खुसीसाथ बाँच्न चाहनुहुन्छ भने निरोगी हुन आवश्यक छ ।
तपाईले आफ्नो जीवनशैलीलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने हो भने पनि खुसीयाली युक्त जीवन बाँच्न सक्नुहुन्छ । तपाई पनि जीवनमा खुसी र स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने यी उपायहरु अपनाउनुहोस्ः
१. सँधै सकरात्मक सोच राख्ने
२.अरुसँग व्यर्थको अपेक्षाहरु नराख्ने
३. व्यर्थको चिन्ता नगर्ने
४. अरुको खुसी वा सफलताबाट दुःखी वा चिन्तित नहुने
५.हरेक कार्यलाई आफ्नो हैसियत वा क्षमताले भ्याउने तरिकाले मात्रे गर्ने
६.सबै कुरा पर्र्फेट हुनपर्छ भन्ने कुरा आफूमा हावी हुन नदिने
७.सम्बन्ध र मित्रतालाई सजिलोसँग निभाउने
८. देखावटी कुराहरु र कृत्रिम चीजहरुबाट टाढा रहने
९.आँफैलाई उचित महत्व दिने
१०. आफ्नो इच्छा वा आकांक्षामा लगाम लगाउने
११.सानो सानो सफलतामा आनन्द लिने
१३. कसैसँग कुराकानी गर्दा संयमित भएर वा सोचेर सम्झेर कुरा गर्ने
१४.आफ्नो हार वा कमजोरी स्विकार्न सिक्ने
१५. आत्मविश्वासी बन्ने तर अरुलाई नीच नदेखाउने र नसम्झने
१६. अरुलाई दुःख परेको बेला आफूले सकेसम्मसहयोग गर्ने
१७.आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि जिउन सिक्ने
१८. आफ्नो खुसी र आनन्दको लागि हरेक सानो ठूलो काम गर्ने
१९. आफ्नो सौख र प्रतिभा अनुसार समय निकालेर रुचीको काम गर्ने
२०७५, १७ असार, 05:55:33 AM